Bible Mu Nsɛm Adebɔ De Besi Nsuyiri No So - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
Ɛhe na ɔsoro ne asase fi bae? Ɛyɛɛ dɛn na owia, ɔsram, nsoromma, ne nneɛma pii a ɛwɔ asase so no bae? Bible ma mmuae a ɛyɛ nokware bere a ɛka sɛ Onyankopɔn na ɔbɔe no. Enti yɛn nhoma no de Bible mu nsɛm a ɛfa adebɔ ho na efi ase.
Wɔkyerɛ sɛ na Onyankopɔn abɔde a wodi kan no yɛ ahonhom, te sɛ ɔno ankasa. Na wɔyɛ abɔfo. Nanso wɔbɔɔ asase no maa nnipa te sɛ yɛn. Enti Onyankopɔn yɛɛ ɔbarima ne ɔbea a wɔfrɛ wɔn Adam ne Hawa, na ɔde wɔn traa turo fɛfɛ bi mu. Nanso wɔantie Onyankopɔn na wɔn nkwa bɔɔ wɔn.
Ne nyinaa mu no, efi bere a ɔbɔɔ Adam besi Nsuyiri kɛse no so no yɛ mfe 1,656. Saa bere yi mu no nnipa bɔne pii traa ase. Ɔsoro no, na honhom abɔde a aniwa nhu wɔn, Satan ne n’abɔfo bɔne no wɔ hɔ. Asase so no, na Kain ne nnipa bɔne afoforo pii wɔ hɔ, a na nnipa bi a wɔwɔ ahoɔden soronko bi ka ho. Nanso na nnipa pa bi nso wɔ asase so—Habel, Henok ne Noa. Ɔfã a EDI KAN yi mu no, yɛbɛkenkan saa nnipa yi ne nneɛma yi nyinaa ho nsɛm.